EarMianara mivarotra | Signal Forex maimaim-poana | Sekolin'ny varotra tsara indrindra eran'izao tontolo izao
Lisitry ny fijerena
MAHAZOA SIGNAL VIP FOREX
Vaovao EUR / USD
Kaonty Forex nahazo famatsiam-bola
Sehatra varotra Forex tsara indrindra
Indikator Forex tsara indrindra
Vondrona Telegram Forex Signals tsara indrindra 2021
Dinika Demo Account
Kaonty Mini & Micro
Torohevitra fivarotana Forex
Fitantanam-bola voafehin'ny Forex
Kaonty PAMM tantanana
Ianaro ny fomba varotra Crypto
Ianaro ny fomba varotra Bitcoin
Vondron-telegraman'ny Crypto Signals tsara indrindra 2021
Ny sehatra fivarotana Crypto tsara indrindra
Mividiana Bitcoin Miaraka amin'ny carte de crédit
Mividiana Bitcoin Miaraka amin'ny carte de crit
Ahoana no hividianana Ethereum
Fitrandrahana Cloudy Bitcoin
Mianara mivarotra Forex
Inona ny fivarotana Forex
Mianara mivarotra tahiry
Mianara manao varotra antoandro
Ianaro ny varotra asa
Inona ireo Forex Pips
Mianara mivily varotra
Ahoana ny fomba hitantanana ny fampielezana anao
Ahoana ny fomba fivarotana loha
Ahoana ny fomba hividianana tahiry fohy
Ahoana ny fampiasana margin rehefa mivarotra
Sehatra varotra tsara indrindra
Signal amin'ny stock tsara indrindra
Kopia ho azy ny fivarotanay amin'ny eToro
Fampiharana fifanakalozana Forex tsara indrindra
Kaonty mpivarotra UK
PDF Action Action Trading
Fifanakalozana ho avy
Varotra Penny Stock
Forex ve Halal
Kaonty fivarotana Islamika
Mpivarotra tsara indrindra amin'ny eToro
Broker Forex Silamo
Broker amin'ny ho avy
Broker ASIC tsara indrindra
Broker CFTC tsara indrindra
Broker CySEC tsara indrindra
Broker FCA tsara indrindra
Broker SEBI tsara indrindra
Ny fijerena broker
Famerenana ny tsena manerantany
Mpamatsy famantarana Forex tsara indrindra eran-tany
Ny tsenan'izao tontolo izao eo an-tananao
amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza
Midira amin'ny Telegram ho an'ny famantarana maimaimpoana!
Mitarika ny tsena
Fivarotana Crypto isan-kerinandro
BTC, ETH, XRP & LTC Fomba fijery ara-teknika
75% ny kaonty CFD antsinjarany very vola
Manomboha fahazoana famantarana famantarana maimaim-poana izao!
Fambara tsy ara-dalàna hatramin'ny 10 mahasoa isan'andro
Fandraisana mora amin'ny Forex sy Crypto Signals
Fanadihadiana ara-teknika isan'andro sy toro-hevitra ara-barotra
Vondron'olona mpivarotra mavitrika maherin'ny 15,000
Fanairana amin'ny fotoana tena izy, amin'ny alàlan'ny Telegram!
Midira amin'ny vondrona Telegram
Fanairana eo noho eo amin'ny mailakao
Eo anelanelan'ny 4-5 Famantarana marina sy mahasoa isan'andro!
Fanadihadiana ara-teknika isan'andro sy toro-hevitra momba ny varotra
Fanadihadiana momba ny vidin'ny Tron - 9 aprily
Zoma, Aprily 9, 2021
Tron (TRX) dia nandefa tombony maherin'ny 140% tao anatin'ny tapa-bolana lasa izay ary mbola mampiseho fanantenana ara-pahasalamana hahazoana tombony fanampiny ao anatin'ny fotoana fohy. Araka ny tatitra sasany, ireto misy sasantsasany amin'ireo anton-javatra lehibe iankinan'ny fanantenana ny fahazoana tombony bebe kokoa amin'ny cryptocurrency lehibe indrindra fahenina ambin'ny folo. Voalohany, mandefa […] ny tamba-jotra Tron
EURJPY Miverina amin'ny haavo 130.00, Yen iharan'ny tsindry rehefa miakatra i Etazonia
Fanadihadiana momba ny vidin'ny EURJPY - 9 aprily Nandritra ny fotoam-pivoriana Eoropeana zoma, ny EURJPY dia naka etona tamin'ny fanarenana ny andro teo aloha tamin'ny ambaratonga 130.00 ary manohy manohy ambaratonga avo kokoa manodidina ireo faritra 131.00. Ny mpivady dia tsy maintsy mandresy sakana miakatra 130.66 hanatsarana ny fihenan-tsainy mankany amin'ny haavo 131.00. Ny mafy isan'andro […]
Milentika volamena mba hamerenanana indray ny 1745
Fanohanana lehibe: 1745 fanoherana lehibe: 1760 - 1790 Ny volamena dia namory 4.80% hatramin'ny nivoahany tamin'ny haavon'ny 1678-1680 tamin'ny herinandro lasa teo. Mbola metaly lava be sy be vidiny izahay ary tapaka ny vidiny omaly miaraka amin'ny ambaratonga lehibe (1745) izay ny haavon'ny niverenany tamin'ny volana Jona 2020 mba hampisondrotra ny fotoana rehetra […]
EUR / AUD Làlana ambonimbony kokoa amin'ny karatra!
Ny EUR / AUD dia milalao miaraka amin'ny faritra misy fanoherana mahery vaika aorian'ny fitsambikinana mihoatra ny sakana akaiky sasany. Ny mpivady dia nampiseho famantarana mifamadika, saingy mbola mila fanamafisana ihany isika alohan'ny handehanana lava. Ny hetsika ny vidiny dia nanondro fa tapitra ny hetsika ambany ary mety hampivelatra tongotra vaovao kokoa ny mpivady. Ny fihenan-tsaina dia avo ao anatin'ny fotoana fohy, […]
Ny GBP / JPY dia manohy ny hetsika mankany ambany, mety hahita fanohanana amin'ny haavo 149.57
Haavo lehibe fanoherana: 150.000, 152.000, 154.000Fanohanana fototra: 146.000, 144.000, 142.000 GBP / JPY vidiny fironana maharitra: BullishGBP / JPY dia ao anaty fiakarana ankehitriny fa miatrika fandavana ankehitriny amin'ny haavo 153.00. Ny kilao dia milatsaka taorian'ny fandavana azy tamin'ny haavo farany teo. Ny vidin'ny pounds dia nanapotika ny SMA 21 andro ary manakaiky ny SMA 50 andro. Fiatoana ambany […]
Binance (BNBUSD) Ny vidiny dia mety hitombo amin'ny $ 485 raha omena ny haavon'ny $ 420
Fanadihadiana momba ny vidin'ny BNBUSD - Aprily 09 Ny fiakaran'ny vidiny fanampiny dia vinavinaina raha mbola mitazona na mampitombo ny tanjaky ny omby ary miditra ny haavon'ny fanoherana ny haavon'ny $ 420, avy eo, ny haavon'ny fanoherana amin'ny $ 485 sy $ 545 dia mety hosedraina. Ny fihenan'ny haavon'ny vidiny $ 364 dia hampiharihary ny farantsany ho $ 311 sy $ 254 […]
Polkadot (DOT) manapaka ny fanoherana amin'ny $ 40, manohy ny fiakarana
Haavo lehibe fanoherana: $ 40, $ 42, $ 44 Haavo mpanohana: $ 30, $ 28, $ 26 Polkadot (DOT) vidiny Fironana maharitra: BullishOo 2 aprily, natosiky ny mpividy ny vidin'ny DOT mihoatra ny fanoherana $ 40. Niakatra hatramin'ny 46.74 $ ny altcoin saingy nanohitra izy. Tamin'ity fiatoana ity, ny crypto dia nanapaka ny fivezivezena tamin'ny 20 febroary. Saingy, tao anatin'ny 48 ora lasa izay, ny vola […]
Banky Foiben'ny Eoropeana (EZB)
Ny minitra ECB dia manambara ny tombontsoa azo avy amin'ny stimulus amerikana mbola ho hita mandritra ny volana martsa
Alakamisy, Aprily 8, 2021
ECB minitra ho an'ny fivoriana amin'ny volana martsa dia nanohana ny EURUSD. Nasehon'ny protokolota fa nahita risika amin'ny fitomboan'ny harinkarena ireo mpanao politika noho ny fanentanana ara-bola lehibe amerikana. Mandritra izany fotoana izany, na eo aza ny fiakaran'ny vidim-piainana akaiky kokoa, ny fiakaran'ny vidim-piainana dia tokony hijanona ambany sy ambanin'ny tanjon'ny banky foibe. Ireo mpanao politika dia nivoady koa fa hanafainganana ny fividianana PEPP ao amin'ny 2Q21 hamehezana ny taha-bola. Ireo mpanao politika […]
Ao anatin'ny fanapahan-kevitry ny FOMC hitazona ny toeran'ny fatotra, ny Euro dia miala
Ny tahan'ny fifanakalozam-bola euro tamin'ny alakamisy dia niova tsy niova. Ny mpivady EUR / USD dia mifanakalo amin'ny 1.1880 ankehitriny, tafakatra 0.07% mandritra ny andro. Tamin'ny fiandohan'ny herinandro dia mafana be ny euro: nitombo efa ho 1.0% ny mpivady EUR / USD ary sambany tao anatin'ny tapa-bolana no tafakatra ambonin'ny haavon'ny 1.19. Na izany aza, ny mpivady […]
Ny volamena (XAUUSD) dia mamaky ny fanoherana $ 1,750, manohy ny fiakarana
Haavo lehibe fanoherana: $ 1,900, $ 1,950, $ 2000 ambaratonga mpanohana: $ 1,750, $ 1, 700, $ 1,650 volamena (XAUUSD) fironana maharitra: RangingGold dia manao hetsika mihetsika satria ny vidiny manimba ny fanoherana amin'ny $ 1,750. XAUUSD dia hivoaka ny faritra voafetra raha maharitra ny fiakaran'ny vidiny. Ny fiakarana miakatra dia mety hiatrika fanoherana amin'ny $ 1,800 sy $ 1,840. Amin'ny vidiny teo aloha […]
Varotra ny tsena amin'ny
SIGNALS FOREX tsara indrindra
Araho ny famantarana Forex maimaim-poana amin'ny vola crypto, varotra ary indeks
Adikao ireo mpivarotra tsara indrindra
Raiso ny tombotsoan'ny tsena miaraka amin'ny broker Forex tsara indrindra
Mianara mivarotra paikady sy vaovao Forex
MPANDRAY FOREX &
Ny torolàlana farany ho an'ny mpivarotra Forex
Tsy isalasalana fa ny broker dia mitana andraikitra lehibe eo amin'ny tsena Forex. Fa amin'ny vao manomboka, azonao ve ny anjara asan'ny brokers? Vakio ny Torolàlana momba ny broker Forex eto hahafantatra ny andraikitra voalohany amin'ny broker Forex.
Betsaka ny varotra tsy maintsy atao amin'ny maha-zazavao amin'ny tsenan'ny Forex, fa avy eo (indray), mila ny sehatra varotra varotra forex tsara indrindra ianao hanaovana ny varotrao. Izany no antony manazava ny pejinay eto ny sehatra varotra forex tsara indrindra ho an'ny vao manomboka.
Tazomy ny diary fivarotana
Ny diary fivarotana dia lozisialy rehetra ao amin'ny varotrao. Matetika, ny diary dia manome fitaovana ho an'ireo mpivarotra sahirana sahirana mila manombatombana ny tenany amin'ny zava-kendrena. Fa inona no maha-zava-dehibe ny fihazonana diary misaraka? Avelao izahay hilaza aminao izay rehetra tokony ho fantatrao Eto.
Famakiana ny tahan'ny zanabola
Misy fiatraikany lehibe eo amin'ny tsena forex ny fanovana ny tahan'ny zanabola. Ny fanovana dia mazàna ataon'ny iray amin'ireo banky foibe valo manerantany. Misy fiatraikany eo amin'ny mpivarotra eny an-tsena avy hatrany ny fanovana, ka noho izany, ny fahatakarana ny fomba fihetsika ary koa ny maminavina ireo hetsika ireo dia ho isan'ireo voalohany dingana hahazoana tombony ambony.
Fenoy ny fividiananao
Tonga soa eto amin'ny mailaka
Fahombiazana tamin'ny andro voalohany
Mianara mivarotra raha vao manomboka amin'ny tontolon'ny online trading, efa tonga amin'ny toerana mety ianao. Ny tranokalanay dia hitondra anao amin'ny fitaovana ilaina rehetra hanakanana ny asanao varotra amin'ny tongotra ankavanana.
Manome torolàlana feno momba ny varotra zavatra rehetra izahay - toy ny fiasan'ny indostria forex an-tapitrisany maro, inona ny CFD ary ny antony maha-zava-dehibe azy ireo amin'ny tanjon'ny fampiasam-bola maharitra, ny tombony, ny fiparitahana, ny baiko ary ny zavatra hafa rehetra. heverinay fa tokony ho fantatrao alohan'ny hanombohanao manao vivery ny volanao manokana.
Amin'ny maha-zava-dehibe azy, rehefa mandany ny fotoana ilaina amin'ny fitetezana ireo fitaovana fanabeazana marobe izahay, dia hamela ny sehatra misy anay hanana ny fahaiza-manao sy fahalalana ilaina mba hahombiazanao amin'ny ezaka varotra an-tserasera.
Fifanakalozana ho an'ny vao manomboka: Ahoana ny fomba fiasan'ny varotra an-tserasera?
Raha mbola tsy nametraka varotra tokana ianao teo amin'ny fiainanao dia zava-dehibe ny fahafantaranao ny zavatra ataonao alohan'ny hisarahana amin'ny volanao. Rehefa dinihina tokoa, ny varotra an-tserasera dia misy risika marobe - maro amin'izy ireo no mety hanakana ny fahafahanao mahazo tombony tsy miova. Araka izany, andao aloha hanomboka topy maso 360 degre momba ny fomba fizotry ny fifanakalozana farany.
Misafidy mpivarotra an-tserasera
Raha te-varotra an-tserasera dia mila mampiasa broker ianao. Elaela ny andro izay ilainao hametrahana ny fividianana sy fivarotana kaonty an-tariby miaraka amin'ny mpivarotra hatrizay.
Mifanohitra amin'izany no izy, izao dia novonoina tamin'ny Internet. Raha ny marina, tsy vitan'ny mifanakalo varotra avy ao amin'ny fampiononana ao an-tranonao fotsiny ianao, fa ny ankamaroan'ny mpanelanelana amin'ny Internet dia manolotra fampiharana varotra tanteraka. Araka izany, afaka mifanakalo varotra ianao izao raha mbola mihetsika.
Raha io voalaza io, dia misy broker an-tserasera an'arivony maro manompo ny mpanjifa antsinjarany isan'andro. Amin'ny lafiny iray, mahasoa tokoa io amin'ny fomba fijerinao amin'ny maha mpivarotra anao, satria ny fahafenoan'ny sehatra mihintsy dia midika fa tsy maintsy miakatra ny elanelam-be ny mpivarotra mba hialana amin'ny fifaninanana.
Mety ho amin'ny endrika fampihenana ny saram-barotra sy ny fiparitahan'ny fihenjanana, na ny fiasa vaovao toy ny 'Copy Trading'. Etsy ankilany, manahirana izaitsizy ny mahafantatra hoe sehatra varotra an-tserasera hanao sonia.
Ahoana ny fomba hisafidiananao sehatra varotra an-tserasera?
Mba hanampiana anao eny an-dàlana, dia nitanisa ny sasany amin'ireo zava-dehibe indrindra tokony hodinihinao rehefa mifidy mpivarotra an-tserasera.
Mba hanolorana serivisy fifanakalozana an-tserasera amin'ny mpanjifa antsinjarany monina any UK, ny brokers dia tsy maintsy fehezin'ny Financial Conduct Authority (FCA). Raha izany dia fepetra takiana tsy azo ifampiraharahana io raha ny amin'ny fisafidianana sehatra vaovao.
Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny broker an-tserasera dia mitanisa ny laharana fisoratana anarana FCA, izay azonao atao ny mifampiresaka amin'ny alàlan'ny tranokalan'ny mpandrindra. Raha tsy izany dia azonao atao ny mitady ny anaran'ny mpivarotra an-tserasera amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana FCA. Farany, raha tsy mahazo fahazoan-dàlana FCA ny mpivarotra dia tokony hisoroka ny sehatra amin'ny vidiny rehetra ianao.
🥇 Ny fandoavam-bola
Ianao koa dia mila mandinika izay fomba fandoavam-bola tianao hampiasaina raha ny amin'ny fametrahana sy famoahana vola. Ny fomba mora indrindra hanaovana izany dia amin'ny alàlan'ny carte de crédit na carte de crédit, satria matetika dia eo no eo ny fametrahana.
Ankoatr'izay, ny broker sasany dia mamela anao hampiasa e-wallet toa an'i PayPal na Skrill, na dia tsy izany foana no izy. Ankoatr'izay, ny ankamaroan'ny brokers dia manohana ny famindrana banky. Na dia mamela fetra avo kokoa noho izany aza ny mazàna, ny famindrana banky no safidy farany miadana indrindra.
🥇 Ny sarany sy ny fanaparitahana
Mila mandoa sarany karazana ianao amin'ny fampiasana sehatra varotra an-tserasera, satria ny broker dia eo amin'ny sehatry ny fitadiavam-bola. Mety mila mandoa kaomisiona miovaova ianao, izay isan-jaton'ny isan'ny varotrao. Ohatra, raha mametraka varotra mitentina £ 4,000 ianao, ary miakatra 0.2% ny mpanelanelana amin'ny komisiona, dia handoa £ 8 amin'ny sarany ianao.
Ambonin'ny kaomisiona dia mila mandinika ny fiparitahana ihany koa ianao. Io no mahasamihafa ny vidin'ny 'mividy' sy ny vidin'ny 'mivarotra'. Raha avo loatra ny fanaparitahana dia hisy fiatraikany mivantana amin'ny fahafahanao mahazo tombony tsy miovaova izany. Ohatra, raha toa ka mipaka amin'ny isan-jaton'ny tena izy ny 1% dia mila manamboatra farafahakeliny 1% fotsiny ianao mba handravana kely fotsiny.
🥇 Fitaovana ara-bola
Mila mandinika ihany koa ianao momba ny isa sy ny karazana fitaovana ara-bola ampiantranoin'ny mpivarotra. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny sehatra varotra an-tserasera dia hanarona forex sy CFD. Mikasika ny teo aloha, eto no ividiananao sy ivaranao vola, miaraka amin'ny fahitana tombony amin'ny fivezivezena kely amin'ny vidiny.
Amin'ny tranga CFD (fifanarahana-amin'ny-fahasamihafana), ity dia ahafahanao manombatombana amin'ny sokajin-karena rehetra, fa tsy mila manana ny fananana ifotony. Ohatra, ny CFD dia mamela anao varotra na inona na inona avy amin'ny tahiry sy ny fizarana, ny volamena, ny solika, ny entona voajanahary, ny mari-pamantarana ny tsenam-bola, ny zanabola, ny ho avy, ary na ny any amin'ny crypto.
Tools Fitaovana fivarotana
Ny tsara indrindra dia ny fampiasana broker izay manome lanja lehibe ireo tondro ara-teknika. Ny fitaovana toy izany dia mamela anao hamakafaka ireo fironana momba ny vidiny ara-tantara amin'ny raharaha mandroso. Raha manao izany ianao dia miatrika ny vintana tsara indrindra hanombanana izay ho alehan'ny ho avy amin'ny fanananao voafantina.
Ireo tondro teknika fanta-daza dia misy ny oscillator stochastic, ny salan'isa mihetsiketsika (MA), ny index index an'ny tanjaka (RSI), ary ny tarika bollinger. Amin'ny farany, tokony hisafidy sehatra varotra an-tserasera ianao izay manolotra tondro ara-teknika am-polony.
Ny fahazoana miditra amin'ny fitaovan'ny fikarohana dia zava-dehibe koa mila jerenao rehefa mifidy sehatra varotra vaovao. Tokony ao anatin'izany ny fanavaozam-baovao amin'ny fotoana tena mety hisy fiatraikany amin'ny fananana na indostria iray manokana.
Ankoatr'izay, ilaina ihany koa izy io rehefa manana fizarana fandinihana voatokana ny brokers. Eo no mamoaka ny fomba fijerin'izy ireo ny mpivarotra manam-pahaizana momba ny toerana mety hitrangan'ny fananana sasany eny an-tsena ao anatin'ny fotoana fohy.
Manokatra kaonty miaraka amin'ny sehatra fivarotana an-tserasera
Raha vao misafidy broker an-tserasera mifanaraka amin'ny zavatra ilainao ianao dia mila manokatra kaonty avy eo. Ny fizotry ny fisoratana anarana matetika dia tsy mihoatra ny 5-10 minitra. Raha ny tena izy, ny broker dia mila mahafantatra hoe iza ianao, ary raha manana ny traikefa takiana amin'ny varotra an-tserasera ianao na tsia. Hatao hiantohana ny fenitra mifanaraka amin'ny fitsipika napetraky ny FCA.
Ity misy fampahalalana ilainao hampidirina rehefa manokatra kaonty amin'ny tranokala fivarotana.
✔️ Fampahalalana manokana
Mila mampiditra ny mombamomba anao manokana ianao. Ho tafiditra ao ny anaranao feno, ny adiresinao ao an-trano, ny daty nahaterahanao, ny laharam-piantem-pirenena ary ny antsipirian'ny fifandraisana.
✔️ Fampahalalana momba ny asa
Ny broker dia mila mahafantatra ny satan'ny asa sy ny vola miditra isan-taona aorian'ny haba.
✔️ Mijoro ara-bola
Ianao dia mila mampahafantatra ny mpivarotra hoe inona ny tombam-bidinao, ary na mpivarotra antsinjaranao na andrim-panjakana ianao.
✔️ Traikefa amin'ny varotra teo aloha
Hanontany anao momba ny traikefa ara-barotra taloha ny broker. Anisan'izany ny karazana fananana natakalonao taloha, sy ny haben'ny varotra antonony.
Fanamarinana ny maha-izy azy
Raha te hanaraka hatrany ny lalàna manohitra ny famotsiam-bola dia mila manamarina ny mombamomba anao ireo sehatra fifanakalozana voafetra FCA rehetra. Tonga dia mahitsy ny fizotrany ary mitaky anao fotsiny ny mampakatra ny dika mitovy amin'ny karapanondronao nomen'ny governemanta, ary koa ny porofon'ny adiresy.
Na dia mamela anao hametraka vola aza ny mpivarotra sasany alohan'ny hamaranana ny fizotran'ny fanamarinana dia tsy ho afaka ny hisintona ianao mandra-panamafisana ny antontan-taratasinao. Araka izany, tsara kokoa ny manaisotra ny fizotran'ny KYC (Fantaro ny mpanjifanao) vantany vao manokatra ny kaonty ianao.
Fananana sy fisintonana
Raha mikasika ny famatsiam-bola ny kaonty mpampindram-bola anao dia tokony hatolotra anao amin'ny fomba fandoavam-bola maromaro. Na dia tsy hitovy amin'ny broker-to-broker aza izany dia efa notanisainay eto ambany ny fomba fampirimana sy fisintahana mahazatra indrindra.
🥇 Kara-trosa sy trosa
Ny fametrahana vola amin'ny alàlan'ny carte de debit / carte de crédit dia mazàna miteraka vola avy hatrany. Araho maso ny sarany - indrindra raha mampiasa carte de crédit ianao. Na dia mety tsy handoa vola anao isaky ny milaza aza ny broker, ny mpamoaka carte de crédit dia mety manasokajy ny petra-bola ho vola mialoha. Raha misy izany, dia mety hisarika sarany 3% izany, ampiarahina eo noho eo ny zanabola.
. Famindrana banky
Ny ankamaroan'ny sehatra varotra an-tserasera dia hanaiky ny famindrana banky. Ny dingana dia miadana kokoa noho ny fandoavam-bola amin'ny carte de crédit / credit card, na dia matetika kokoa aza ny fetra. Raha atao amin'ny alàlan'ny UK Faster Payments ny tahiry, dia azo isaina amin'ny andro iray ihany ny vola.
Na dia tsy dia fahita firy noho ny carte debit / crédit na banky famindram-bola aza dia maro amin'ireo broker vaovao no manaiky e-wallet ankehitriny. Anisan'izany ny mitovy amin'ny PayPal, Skrill, ary Neteller. Ny fametrahana e-Wallet dia tsy hoe maimaim-poana fotsiny, fa amin'ny ankamaroan'ny tranga dia mamela anao hisintona ny volanao amin'ny fe-potoana haingana indrindra izy ireo.
Raha liana amin'ny tombom-barotra amin'ny habaka forex an'arivony tapitrisa pounds ianao, dia hividy sy hivarotra vola ianao. Ny foto-kevitra ankapobeny dia ny hahazoana tombony ary rehefa mihetsika ny tahan'ny fifanakalozam-bola.
Araka izany, hanao varotra 'mpivady' forex ianao, izay misy vola roa samy hafa. Ohatra, raha te hivarotra pound sterling amin'ny euro ianao, dia mila varotra GBP / EUR ianao.
Raha io voalaza io, ny broker sasany dia hanao lisitr'ireo mpivady vola 100 mahery. Ireo mpivady vola ireo dia zaraina ho sokajy telo lehibe - ny lehibe, ny zaza tsy ampy taona ary ny exotics.
Araka ny anarany, ny mpivady lehibe dia misy vola roa 'lehibe'. Anisan'izany ny vola avy amin'ireo toekarena lehibe indrindra manerantany, toy ny dolara amerikana, pounds britanika, euro, yen japoney, ary franc Swiss.
Raha vao manomboka eo amin'ny tontolon'ny varotra forex ianao dia tsara ny mijanona miaraka amin'ireo mpivady lehibe. Izany dia satria mihatra amin'ny ambaratonga ambany ambany ny majors, mihamafy ny fielezany ary mitombo ny fatiantoka.
🥇 Tsy ampy taona
Ny mpivady kely dia misy vola lehibe iray ary vola iray tsy dia mihena. Ny AUD / USD dia ohatra voalohany amin'ny mpivady tsy ampy taona. Ny dolara amerikana dia maneho ny vola lehibe ampiasain'ny mpivady, raha ny dolara aostraliana no vola kely takiana.
Na dia mbola mahazo tombony amin'ny vola mitentina be aza ny zaza tsy ampy taona, dia matetika ny fiparitahana dia lehibe lavitra noho ireo lehibe. Midika izany fa ny mpivarotra zaza tsy ampy taona dia lafo kokoa amin'ny fotoana maharitra. Miaraka amin'io voalaza io dia somary avo kokoa ny volatility amin'ireo tsiroaroa kely, noho izany misy fotoana bebe kokoa ahazoana tombony lehibe kokoa.
Ny mpivady vola vahiny dia misy vola mipoitra sy vola lehibe. Mety tafiditra ao anatin'izany ny dolara amerikana sy ny dong vietnamiana, na ny sterling pound manohitra ny lira tiorka.
Na izany na tsy izany, ny mpivady avy any ivelany dia mety ho mora miovaova, ary matetika dia malalaka be ny fiparitahana. Izany no antony tsara indrindra hialanao amin'ny exotics mandra-pianaranao varotra forex amin'ny ambaratonga mandroso.
Ahoana ny fiasan'ny varotra Forex?
Raha vantany vao nifidy mpivady vola izay tianao ianao dia mila mamaritra ny làlana handehanan'ny tsena. Alohan'ny handinihantsika ireo fototra, zava-dehibe ny hanazavana ny fahasamihafana misy eo amin'ny kaomandy 'mividy' sy ny 'fivarotana' eo amin'ny sehatry ny varotra forex.
🥇 Raha mino ianao fa napetraka teo amin'ny lafiny ankavia ny roa dia handeha mitombo amin'ny sanda, avy eo dia mila mametraka a mividy kaomandy.
🥇 Raha mino ianao fa napetraka teo amin'ny lafiny ankavanana ny roa dia handeha mitombo amin'ny sanda, avy eo dia mila mametraka a mivarotra kaomandy.
Ohatra, ndao atao hoe mivarotra GBP / USD ianao. Raha tsapanao fa toa nitombo ny sandan'ny GBP raha oharina amin'ny USD, dia hametraka baiko mividy izahay. Toy izany koa, raha tsapanao fa hiakatra ny USD mifanohitra amin'ny GBP, dia hametraka baiko mivarotra ianao.
Ohatra amin'ny baiko 'Buy' amin'ny varotra Forex
Mifikitra amin'ny lohahevitra GBP / USD, avelao 'hiteny fa nametraka kaomandy $ 500' mividy 'ianao. Midika izany fa mino ianao fa hiakatra ny vidin'ny GBP raha oharina amin'ny USD.
Ny vidin'ny GBP / USD dia 1.32 ankehitriny
Nametraka kaomandy mividy 500 pounds ianao
Ny GBP / USD dia miakatra ho 1.34, midika izany fa mihamafy ny GBP raha oharina amin'ny USD
Mampiseho fitomboana 1.51%
Ny tombom-barotrao dia mitentina £ 7.55 (£ 500 x 1.51%)
Ohatra amin'ny baiko 'Sell' amin'ny varotra Forex
Amin'ity ohatra ity dia hifikitra amin'ny GBP / USD ihany koa isika. Amin'ity indray mitoraka ity ihany, dia hametraka baiko 'mivarotra' izahay. Midika izany fa mino ianao fa hihoatra ny GBP ny USD.
Nametraka kaomandy amidy £ 1,500 ianao
Ny GBP / USD dia nihena ho 1.29, midika izany fa mihamafy ny USD manohitra ny GBP
Maneho ny fihenan'ny 2.27%
Ny tombom-barotrao dia mitentina £ 34.05 (£ 1,500 x 2.27%)
Mianara mivarotra CFD
Ny ampahany lehibe faharoa amin'ny sehatry ny fifanakalozana an-tserasera dia ny an'ny CFD. Araka ny efa nolazainay teo aloha, ny CFD dia mamela anao hividy sy hivarotra saika isaky ny kilasy fananana azo eritreretina. Izany dia satria tsy takiana aminao ny hanana na hitahiry ny fananana ifotony hampiasa vola ao.
Fa kosa, ny CFD dia manara-maso fotsiny ny vidin'ny tena izy amin'ny fananana. Araka izany, ny CFD dia mitaona tokoa amin'ny fidirana amin'ny tsena izay sarotra ho tratrarina.
Ireto ambany ireto dia nitanisa ireo kilasy fananana lehibe fonosan'ny CFD izahay.
✔️ Tahiry sy fizarana
✔️ Saran'ny zanabola
✔️ Metaly mafy
Ahoana ny fiasan'ny varotra CFD?
Raha jerena ny fomba fiasan'ny varotra CFD, dia mitovy amin'ny fividianana sy fivarotana mpivady forex izany. Ny fahasamihafana lehibe ilainao hampahafantarina amin'ity dingana ity dia ny terminology. Mandritra ny forex dia matetika mamaritra ny varotra ho toy ny kaonty mividy na mivarotra, amin'ny habaka CFD dia mampiasa ny teny hoe 'lava' sy 'fohy' izahay.
Ankoatr'izay, ny CFD dia tsy tonga tsiroaroa toy ny forex. Raha tokony ho izany, mifanakalo fananana mifanohitra amin'ny sandan'ny tena izy ianao, izay matetika ny dolara amerikana. Ohatra, na mifanakalo CFD amin'ny endrika tahiry, solika, entona voajanahary, na volamena ianao - matetika dia sarobidy amin'ny USD ny fananana.
🥇 Raha mino ianao fa handeha ny fananana mitombo amin'ny sanda, avy eo dia mila mametraka a ela filaminana.
🥇 Raha mino ianao fa handeha ny fananana mihena amin'ny sanda, avy eo dia mila mametraka a fohy filaminana.
Ity dia iray amin'ireo endrika manintona indrindra amin'ny varotra CFD, satria hanana ny safidy fivarotana fohy foana ianao. Eto ianao no manombatombana momba ny sandan'ny fahaverezan'ny fananana. Ity dia zavatra izay mety ho sarotra ny maka tahaka azy eo amin'ny sehatry ny fampiasam-bola nentim-paharazana amin'ny maha-mpivarotra antsinjarany azy.
Raha mitady varotra tahiry amin'ny fotoana maharitra ianao, dia ho tsara indrindra amin'ny fividianana ny entam-barotra nofidinao tamina mpivarotra mahazatra. Izany dia satria hanananao ny tahiry mivantana, midika izany fa ho zatra ny fiarovana ny mpampiasa vola ianao.
Zava-dehibe dia tafiditra ao anatin'izany ny zony ara-dalàna amin'ny fandoavam-bola rehetra izay zarain'ny orinasa voalaza - mifanentana amin'ny isan'ny fizarana hazoninao.
Na izany aza, raha te hividy varotra tahiry amin'ny fotoana fohy ianao dia mila mampiasa sehatra CFD. Izany dia satria ny sarany mifandraika amin'ny fividianana sy fivarotana tahiry amin'ny heviny nentim-paharazana dia ambony lavitra noho ny CFD. Ankoatr'izay - amin'ny maha mpanjifa antsinjaranao anao dia hanana kely, raha misy, ny fahafaha-mivarotra fohy ny fananana voafantina. Indray mandeha indray, ity dia zavatra natolotry ny sehatra CFD rehetra.
Na eo aza izany, raha te hiditra amin'ny tsena fivarotana an-tserasera ianao, dia hanana safidy roa - fividianana sy fivarotana fizarana tsirairay, na fampiasam-bola amin'ny index.
✔️ Fifampizarana fizarana isam-batan'olona
Raha manana ny fahaiza-manao takiana amin'ny fampiasam-bola amin'ny orinasa tsirairay ianao dia hanana fidirana amin'ny fananana CFD an'arivony. Tafiditra ao anatin'izany ireo orinasa manga-manga voatanisa eo amin'ny tsena malaza toa ny NASDAQ sy London Stock Exchange, ary koa ireo orinasa kely hatreto.
Raha misafidy ny làlan'ny CFD ianao, ny sandan'ny anjaranao nofidinao dia hitaratra ny vidin'ny tany tena izy. Ohatra, raha miakatra 2.3% ny vidin'ny zara-paraky Amerikanina Momba ny sigara ao anatin'ny fe-potoana 24 ora dia hitombo 2.3% koa ny CFD tsirairay avy.
✔️ Fivarotana Index Index an'ny tsena
Raha te hivarotra tahiry sy fizarana ianao, saingy tsy manana fahalalana takiana ianao hisafidianana orinasa tsirairay, dia mety ny mandinika ny mari-pahaizana momba ny tsena.
Antsoina koa hoe 'index', ny index index market dia mamela anao haminavina orinasa marobe an-jatony amin'ny varotra tokana - avy eo manova ny toerana misy anao amin'ny indostria maro.
Ohatra, amin'ny fampiasam-bola amin'ny S&P 500, azonao atao ny mividy ny fizarana amin'ny 500 amin'ireo orinasa lehibe indrindra voatanisa ao Etazonia. Toy izany koa, ny index FTSE 100 dia mamela anao hampiasa vola amin'ireo orinasa lehibe indrindra 100 voatanisa ao amin'ny London Stock Exchange.
Indray mandeha indray, raha misafidy index index market amin'ny endrika CFD dia hanana safidy handeha lava na fohy ianao. Araka izany, mbola hanana fotoana ahazoana tombony ianao na dia latsaka aza ny tsenan'ny tahiry midadasika kokoa.
Inona ny Spread?
Na inona na inona varotrao forex na CFD dia mila manana fahatakarana mafy momba ny fiparitahana ianao. Amin'ny endriny ifotony indrindra, io no mahasamihafa ny vidin'ny 'mividy' sy ny vidin'ny 'mivarotra'. Ambonin'ny kaomisionan'ny varotra, ny fanaparitahana dia manome antoka fa hahazo vola ny broker an-tserasera.
Ny haben'ny fiparitahana dia zava-dehibe aminao mpivarotra satria manondro izay sarany aloanao ankolaka. Ohatra, raha misy elanelana 0.5% amin'ny fiparitahana rehefa mivarotra tahiry, midika izany fa mila mahazo farafahakeliny 0.5% ianao raha mahazo fotsiny.
Ohatra amin'ny fanaparitahana amin'ny CFD
Ny fomba tsotra indrindra hanisana ny fiparitahan'ny varotra CFD dia ny fanatanterahana ny fahasamihafana isan-jato eo amin'ny vidin'ny fividianana sy fivarotana.
Ianao dia mitady handeha 'lava' amin'ny diloilo
Ny brokeranao dia manolotra vidiny 'mividy' $ 71
Ny vidin'ny 'mivarotra' dia $ 69
Midika izany fa ny fielezana dia ny mahasamihafa ny $ 69 sy $ 71
Raha zahana isan-jato dia 2.89% ny fanaparitahana azy
Na inona na inona fanapahan-kevitrao handehananao lava na fohy amin'ny solika dia handoa 2.89% ianao. Midika izany fa mila manao tombony 2.89% farafaharatsiny ianao mba handravana fotsiny.
🥇 Raha mandeha ianao ela amin'ny menaka dia mila mandoa ianao $71. Raha mivoaka avy eo amin'ny toeranao avy hatrany ianao dia amin'ny vidiny mivarotra izany $69. Araka izany, mila ny vidin'ny solika ianao mitombo by 2.89% handrava fotsiny.
🥇 Raha mandeha ianao fohy amin'ny menaka dia mila mandoa ianao $69. Raha mivoaka avy hatrany amin'ny toeranao ianao dia amin'ny vidiny vidiny no hanaovanao izany $71. Araka izany, mila ny vidin'ny solika ianao mihena by 2.89% handrava fotsiny.
Inona no atao hoe Leverage?
Ny leverage dia fitaovana mampientam-po sy mampidi-doza ho hitanao amin'ny ankamaroan'ny tranonkala fifanakalozana an-tserasera. Raha fintinina, ny leverage dia ahafahanao mivarotra amin'ny ambaratonga avo kokoa noho izay anananao ao amin'ny kaonty mpampindram-bola anao. Ny vola manokana dia mamaritra zavatra iray, toy ny 2: 1, 5: 1, na 30: 1. Arakaraka ny maha avo ny singa no mampifanakalo anao bebe kokoa ary arak'izany - ny habetsaky ny tombom-barotra na fatiantoka ho anao.
Ohatra, ndao lazaina fa 300 fotsiny ny vola ao amin'ny kaontinao. Te handehandeha lava amin'ny gazy voajanahary ianao, satria tsapanao fa tsy dia misy lanjany loatra ilay harena. Araka izany, mampihatra tombony amin'ny 10: 1 ianao, midika izany fa mivarotra £ 3,000 ianao.
Amin'ity ohatra ity, ny £ 300-nao izao no marika. Raha nidina ny sandan'ny varotrao tamin'ny 10: 1 (100/10 = 10%), dia ho very ny sisinao manontolo. Izy io dia fantatra amin'ny hoe 'voafoaka'. Toy izany koa, raha £ 300 ny sisinao ary mifanakalo amin'ny 25: 1 ianao, dia ho voaroaka ianao raha toa ka 25 ny haben'ny 1 (100/25 = 4%) no nidina.
Raha mpivarotra antsinjarany monina any UK ianao (na firenena mpikambana eoropeanina momba an'io), dia hofehezin'ny fetra fanararaotana napetraky ny European Securities and Markets Authority (ESMA) ianao.
Fepetra ampiasain'ny ESMA
30: 1 ho an'ny mpivady forex lehibe
20: 1 ho an'ny mpivady forex tsy miankina lehibe, volamena ary indeks lehibe
10: 1 ho an'ny entam-barotra hafa ankoatry ny indice volamena sy tsy ara-bola
5: 1 ho an'ny tahiry tsirairay
2: 1 ho an'ny crypto
Filankevitry ny tsena: Inona avy ireo ary manao ahoana ny asany?
Raha te hianatra varotra an-tserasera ianao, tena zava-dehibe ny hahalalanao ny fomba fiasan'ny kaomandy. Raha ny tena izy, ity dia hahafahanao manidy varotra mandeha ho azy rehefa misy ny vidin'ny vidiny.
Ohatra, raha mandeha aminao ny varotra dia azonao antoka ny mahazo tombony amin'ny fanidiana azy ho azy ny varotra. Simiaillly, raha misy varotra mifanohitra aminao, ny filaminan'ny tsena dia afaka mivoaka ny varotra ary amin'izany - mampihena ny fatiantoka anananao.
Ireto ambany ireto dia nitanisa ny sasany amin'ireo baiko lehibe manan-danja indrindra izay mila ampahafantarinao azy.
✔️ Orinasa mijanona tsy very
Araka ny tondroin'ilay anarana, ny kaomandy fijanonana fahaverezana dia hanalefaka ny fiheverana ankapobeny ny varotra very. Ohatra, andao lazaina fa manombatombana amin'ny Bitcoin ianao, ary manokatra varotra mitentina £ 2,000 amin'ny vidiny $ 9,500 ianao.
Araka izany, manantena ianao fa hiakatra ny vidin'ny Bitcoin. Na izany aza, mametraka baiko fijanonana ianao raha sendra misy zavatra manohitra anao. Satria tsy te ho very mihoatra ny 5% amin'ny sandan'ny varotrao ianao dia mametraka kaomandy fijanonana ho $ 9,025.
Andro vitsy monja taty aoriana, Bitcoin dia niondrana an-tsokosoko ary very ny 20% amin'ny sandany. Tany am-boalohany, ho very £ 400 (20% amin'ny varotra £ 2,000 ianao). Na izany aza, rehefa nametraka fihenam-bidy mandanjalanja ianao amin'ny $ 9,025, dia nampihena ny fatiantoka ho £ 100 fotsiny (5% amin'ny £ 2,000).
✔️ Kaomandy fijanonana-very antoka azo antoka
Manan-kery toy ny kaomandy fijanonana very, tsy misy antoka azo antoka fa ho feno ny baikonao. Ohatra, raha nametraka kaomandy fijanonana ho an'ny GBP / USD ianao nandritra ny valim-pifidianana Brexit, dia azo inoana fa hahita mpividy ilay kaomandy. Izany dia satria nandalo fotoam-pahavitrihana izaitsizy ny GBP / USD.
Mifanohitra amin'izay no izy, ny kaomandy fijanonana 'antoka' dia hifanaraka foana, satria fifanarahana mahomby eo aminao sy ny mpivarotra izany. Mariho fa mila mandoa sarany ambonimbony kokoa ianao amin'ny fampiharana ny kaomandy fijanonana miantoka antoka, na dia mety mandoa vola fotsiny aza izany.
✔️ Raiso ny baiko -Profit
Na dia zava-dehibe aza ny fiarovana ny varotra anao mba tsy ho diso tafahoatra amin'ny fatiantoka lehibe, mila manamboatra baiko ihany koa ianao hanakatona ho azy ny varotra rehefa mahazo tombom-barotra ianao. Raha tsy izany dia mety ho tsy azonao atao ny manidy tombony raha tsy eo amin'ny biraonao ianao. Araka izany, ny kaomandy maka tombony dia hanidy ny varotra amin'ny vidiny efa voafaritra.
Ohatra, raha mifanakalo volafotsy amin'ny $ 18.24 ianao, ary maniry ny hidina-hahazoana tombony rehefa mitombo 10% ny fananana dia azonao atao ny mametraka kaomandy tombony amin'ny $ 20.06. Raha mahatratra $ 20.06 ny vidiny, hikatona ho azy ny varotra miaraka amin'ny tombony 10%.
Aza adino intsony ny varotra indray
Fampandrenesana famantarana ny fotoana tena izy isaky ny misokatra, mihidy na havaozina ny famantarana
Fanairana eo noho eo amin'ny mailakao sy ny telefaona findainao.
Haavo vidin'ny fidirana
Haavo ny vidin'ny fidirana isaky ny signal Fidio fotsiny ny iray amin'ireo Broker Top ao amin'ny lisitra etsy ambony hahazoana izany rehetra izany maimaimpoana.
Te-hahazo vaovao farany amin'ny tsena, fampiroboroboana manokana ary taratasim-baovao. Namaky, nahatakatra ary nanaiky ny Terms & Conditions ary ny Privacy Privacy aho.
Signal Forex tsara indrindra 2021
Ahoana ny fampiasana Signal Forex
Vidin'ny Forex & Sata mivantana
Telegram amin'ny Signals Forex
Ahoana ny fomba hisafidianana Broker
Telegram amin'ny Signal Crypto
Learn 2 Trade dia anaran'ny varotra Gadget Geek Online Ltd.
20-22 Wenlock Road, London N1 7GU Orinasa misoratra anarana: 11746374
Ny fampahalalana ao amin'ny tranokala Learn2.trade sy ao anatin'ny Telegram Group dia natao ho an'ny fanabeazana ary tsy hadika ho torohevitra momba ny fampiasam-bola. Ny fifanakalozana tsena ara-bola dia miteraka risika avo lenta ary mety tsy mety amin'ny mpampiasa vola rehetra. Alohan'ny varotra dia tokony hodinihinao tsara ny tanjonao amin'ny fampiasam-bola, ny traikefa ary ny filan-dratsy. Ny vola ihany no vonona hivarotra anao. Toy ny fampiasam-bola rehetra, misy ny mety hahazaka ny fatiantoka ny sasany na ny fampanjariam-bola rehetra rehefa mivarotra. Tokony hangataka torohevitra tsy miankina alohan'ny varotra ianao raha manana fisalasalana. Ny fampisehoana taloha teo amin'ny tsena dia tsy mari-pototra azo antoka amin'ny fampisehoana amin'ny ho avy.
Learn2.trade dia tsy mandray andraikitra amin'ny fahavoazana nateraky ny atiny omena ao anatin'ny Telegram Groups. Amin'ny fisoratana anarana ho mpikambana dia ekenao fa tsy manome torohevitra ara-bola izahay ary manapa-kevitra amin'ny varotra apetrakao amin'ny tsena ianao. Tsy fantatray ny haavon'ny vola ifanakalozanao na ny habetsaky ny risika azonao amin'ny varotra tsirairay.
Copyright © 2021 Mianara 2 Varotra
Mametraha $ 250 mba hahazoana Signal Forex VIP maimaim-poana mandritra ny 1 taona!
Makà Signal VIPMametraha $ 250 mba hahazoana Signal Forex VIP maimaim-poana mandritra ny 1 taona! Varotra amin'ny MT4 miaraka amin'ny Leverage hatramin'ny 1: 500!